Home Wararka War degdeg ah: Abaabul Dagaal iyo Dib u dhaca Doorashada Aqalka Hoose...
War degdeg ah: Abaabul Dagaal iyo Dib u dhaca Doorashada Aqalka Hoose oo ay Villada Waddo.
Waxaa jira xog laga helayo Villa Somaliya oo ah in dagalllo sokeeye laga abuuro qeybo ka mid ah Galmudug iyo Hirshabeelle gaar ahaan Baletweyne. Xog aad loogu kalsoonaan karo ayaa sheegeysa in Farmajo iyo kooxdiisa ay wadaan abaabul la rabo in Baladweyn ay xabad ka bilaabato oo dagaal laga huriyo sida Galmudug hadda loogu daabulayo ciidan aan shabaab la dagaaleyn ee la safan, si ay u noqoto dib u dhac doorashada aqalka hoose oo ay tahay in laga bilaabo dalka.
Shir ka dhacay Villada oo khadka la soo geliyey dadka hawlaha dagaal ka fulinaya Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa lagu go’aamiyey arrinkaas. Waxaana shaly gaaray Baladweyne koox horudhac ah oo ka socda Villada si Dabageed arinkaas loogu qanciyo taas oo ah nasiib daro iyo dhabarjabin Cali Guudlaawe iyo RW Rooble lagu sameynayo.
Sida cad, way adag tahay inay doorasho nabadeed dhacdo ilaa iyo inta uu Villa Somaliya fadhiyo Farmajjo, kaas oo abaabul joogta ah ugu jira inuu fashiliyo hawlaha doorashada.
Haddaba si loo fuliyo doorashada waxaa lagama maarmaan u muuqata in Farmajo laga saaro Villa Somaliya ama villada dhexdeeda Xabsi guri lagu geliyo lana xadeeyo dhamaan isgarsiinta dad iyo qalab isaga kooxdiisa oo hadda la wada yaqaanno inay yihiin kuwa lid ku ah arrimaha doorashada.